FARIIN KU SOCOTA KORNAYL SHUUTE IYO RAYSAL-WASAARE KHEYRE LAAKIIN!! | SMC
Home WARARKA MAANTA FARIIN KU SOCOTA KORNAYL SHUUTE IYO RAYSAL-WASAARE KHEYRE LAAKIIN!!
FARIIN KU SOCOTA KORNAYL SHUUTE IYO RAYSAL-WASAARE KHEYRE LAAKIIN!!
Mudane gaashaanle sare Kornayl Xasan Shuute, Mudane raysal wasaare Xasan Cali Kheyre, dadka Reer Maayland su’aal daran bay qabaan, fulintiinu gar iyo gardaro ma waxay kaliya uun ay qabataa dadka aan cidina ku duulin guryahooga loogu dul yimaado laguna dulminayo sida:-Qowmiyadaha Reer Banaadiriga, Jareerwayne, Somaliland iyo Reer Maayland?
Mudane Shuutoow Wanlawayn JBM askari askari dilay, ama dhaawacay hawsheedu way ka wayntahay, waa qabiillo, qabiil dhano daggan meel kale uga soo duulay, oo xaajadan waa xaajo oday-dhaqan, haddii walba aad meel aadaysid Gaalkacyo iyo Buluqleey Galmudug state 19 ruux reer Maayland waxba aanay galabsan iska shaqaysanayay oo reer Galmudugga adigu la walaal tahay ay si xun dhashiikaha laamiga qarkii ugu dileen, haddana maalin cad dadkii la laayay maydadkoodi loo diiday in dhulka Maayland lagu aaso, fadlan kuwii dambiilayaasha ahaa maxaad u soo qabqaban wayday, ama xitaa u raadin wayday?
Ma aadan raadin, xitaa kamana aadan hadal. Hadda dagaallo u dhexeeya beesha nadaxwayne Farmaajo Caabudwaaq iyo beesha Xasan Jaamici Cadaado adiguna isku beel guud tihiin ayaa ka dhacaaya Galmudug state oo maydadka iyo dhaawacyadu caddad dhaafay, fadlan maxaad u aadi wayday halkaa, mise Daafeet JBM ayuunbaa kuu jilicsanaatay?
Kismaanyo JBM dad nool nool iyo qaar la dilayo dhintay ayaa baabuur lagu jiijiidaayaa, fadlan maxaad u tagi wayday, mise Wanlawayn uunbaa kula sahlanaatay Mudane?
Diinsoor iyo Buurhakaba JBM dagaallaa ka dhacay kuwaana walba maxaad intood tagto kala jooga u oran wayday fadlan? Marxum Axmed Dowlo oo waxba aan galabsan ka soo jeeda qowmiyadda Jareerwayne caasimadda Xamar ayaa lagu gubay meel dhawr tallaabo adiga kuu jidha, waxaana xayn iyo haweenay ku jidho ay u gubeen, in wiil uu isagu adeer u yahay gabadh raysal-wasaare Xasan Cali Kheyre ku beel uu guursaday darteed su’aal ku timid, “sidee buu wiil jareer ah gabadheenu u guursan karaayaa,”?
Kornayl Shuutow aaway maxkamaddaadi, maxaa waajibkooda loo marsiin waayay siday diinteenu dhigtay qofkii qof dilaa in la dilo?
Mise maxkamaddaadu sidaan horayba u sheegnay waxay qabataa gar iyo gardaraba qowmiyadaha Banaadiriga, Jareerwayne, Somaliland iyo Reer Maayland? Ma qabato miyaa dambiilayaasha Labada-Kambani maxkamadaadu iyo isbaaroolayda isbaarooyinkoodu bilqanyihiin guud ahaan gobolka Shabeellaha-Hoose JBM ummadduna aad loogu saxriiriyo?
Mudane Raysal-wasaare Xasan Cali Kheyre, Illaahay indhihiisu caro maqariyaan oo waa mowjuud, xaadir, adiguna waad joogtaa, Marxuum Axmed Dowlo agtaadaa nolosha bansiin iyo taraq lagula gubay, waxaana gubtay inadeertaa iyo baando isku hayb aad tihiin ooy wadatay, maxaa caddaaladda loogu fulin waayay dambiilayaashii nolosha ku holciyay marxuum Axmed Dowlo oo waliba intaaso agoon ah ka tagey miskiinka?
Mise gabadhaasi wax gubtay waa ina adeertaa Mudane raysal-wasaarow Xasan Cali Kheyre oo waxba lagama qaban karaayo?
Mudane raysal-wasaare fulintii adigaa jooga, ma caseeyayaasha kaliya iyo kuwa la midka oo qaarkood dambiyada lagu nabo intaad soo qabataan miyaad toogataan, amaseba xabbistaan? Mudane raysal-wasaare Shiikh Xasan Daahir Aways oo ilaa iyo haatan mab’da’iisa arrggiiggixisnimadu aanu ka tanaasulin gurigiisuu Live ka soo galaa wuxuu rabana wuu sheegaa, xitaa wuxuu yiraahdaa “Annigu kuwa dowlladda ah ima taaban karaan qabiilkaygay iiga baqaayaan,” oo ilaaladiisuna waa isla beeshiisi, halka qowmiyadaha aynu kor ku soo xusnay, qof shabaab inuu qirtay daayo, xitaa shaki aad ku toogataan. Madaxwayne Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo wax sharci ah aan ku afduubnayn, maxaad wali u haysataan, C/Janankii dadka soo laayayna u fasaxdeen?
Mudane raysal-wasaare, wasiir Cabbaas Siraaji oo golahaaga wasiirada ka tirsanaa agtaada kas cad loogu dilay, maxkamadda ciidanka qalabka sida federaalka Soomaaliya ayaa 2 jeer xukun dil ah ku ridday baaritaan dheer kadib dablihii dilay wasiir Cabbaas, Maxaa Dable Caydiid caddaalladda loo marin waayay?
Mise gacankudhiiglahaasi waa Reer Galmmudug oo adiga iyo Kornayl Shuute iyo isaguba aad isku beel guud tihiin weeye macnuhu Mudane raysal-wasaarow?
Caddaaladduse intee in la’eg bay idiin jidhaa, oo maanta isbaarooyinkii iyo siqiiradii Afgooye JBM lagu kufsaday adinkoo soo agmaray Wanlawayn JBM oo laga gardaranyahay adinkuna ku wada goobanaysaan adinko wata astaanta qaranka calanka buluugga Soomaaliya, Mudanayaal Salballaar Two maxaad isu tihiin?
Gardaro garab og iyo gaajo guri maran ogna kaamaba leexdaan walaal qaali ah amar Alle laakiin!!
Previous articleDhageyso:-Puntland oo soo saartey digniin ku socota Shacabka
Next articleCumar Finish ” Waxaan ka digaynaa inay faraha ka baxdo la tacaalida Coronavirus